apo - Urikupi kugovana zvirinani uye uchaita sei kuti uvandudze iyo nzira yeiyo chiteshi iwe yauri kutsikisa pairi?
Sei - inowanzo shayikwa, sei uri kutumira ichi chemagariro? Kuve nechokwadi chekufunga nezvekuti nei zvichizokubatsira kuyeuka kudaidzwa-kuita-chiito chaunoshuvira kuti fan kana muteveri atore pamwe nemabatiro aunozoita kugona kwekushambadzira kwevanhu.
sei - imwe nzira yakakosha yarasikirwa… uchaenda sei kukwidziridza iyo yekuvandudza? Iwe une chirongwa chekumiririra chevashandi kana vatengi chekugovana? Iwe une bhajeti rekushambadzira iyo positi pane yemagariro chiteshi uko magariro magadzirirwo anowanzo svinwa (senge Facebook)?